Kufuneka wenze nini ukuthenga engxoweni? | Ezezimali
Kufuneka wenze nini ukuthenga engxoweni?
Elinye lawona maxesha anobuqhetseba kwiimarike zamashishini anokulingana ukuthengisa ngokusesikweni kunye nentengiso kwiimarike zezemali. Iya kuthatha isigqibo malunga nefuthe le inzuzo yokusebenza. Ayisiyonyathelo elibaluleke kakhulu ukunyusa imbuyekezo kulondolozo, kodwa kukhuseleko olukhulu kwimisebenzi eyenziweyo. Ngezi zizathu kufuneka uqinisekise ukuba ezi ntshukumo zenziwa phantsi kwezona ndlela zokuziphatha zilungileyo. Ayothusi into yokuba yimali eninzi oyishiyayo.
Ukuqinisekisa ukubaluleka kokuthenga nokuthengisa kakuhle kwii-equities, akukho nto ingcono kunokuba ungaphulukana nayo okanye uyifumane ngokuchaseneyo okuncinci kwezi ntshukumo. Ingakubiza i-euro ezininzi kwi-odolo nganye esungulwe kwintengiso. Awungekhe ungayihoyi le nto ibalulekileyo ukuba ufuna ukuba ngumtyali mali ogqwesileyo. Nangona kunjalo, amaxesha ngamaxesha ezi zikhokelo zokwenza ziya kunikwa ngu ukufunda kwiimarike zezemali. Ngayiphi na imeko, ukusukela ngoku ukuya phambili uya kuba nembono engaphezulu kwesinye yokuyisa kumgangatho wesahlulo. Zombini kwiimarike zesizwe nangaphandle kwemida yethu.
Elinye lamaqhosha okuba uphumelele kwimisebenzi ye-equity kukuhlengahlengisa amaxabiso adwelisiweyo. Ayisiyiyo eyokuthenga kuphela, kodwa ikwiintengiso. Iya kuba sisicwangciso esiliqili sokunyusa inzuzo yokusebenza. Ngaphezulu kwamanye amacebo amaninzi okanye angaphantsi. Awungekhe ulibale ukuba impazamo kula manqanaba amaxabiso inokuvelisa enye ingxaki ngeakhawunti yakho. Ngesi sizathu kubaluleke kakhulu ukuba ungashiyi nantoni na ukuze uphucule.
1 Ivenkile: iindlela ezahlukeneyo
2 Ukuhlonipha ukuxhathisa
3 Akukho mida apha endleleni
4 Kutheni le nto kufuneka uvule izikhundla?
Ivenkile: iindlela ezahlukeneyo
Impazamo eyenziwa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi kunye nexesha elithile kukwenza ngokuchaseneyo nezandla ezomeleleyo zeemarike zezemali. Oko kukuthi, bathenge xa ​​bethengisa kwaye kungenjalo. Kungenxa yokuba elinye lamaqhosha okuphumelela kwintengiso yesitokhwe lilele kwi-axiom endala kodwa esebenzayo esebenza kwii-equities. Eyona nto ibilayo iye kwinto elula njenge thenga xa amaxabiso esezantsi kwaye uthengise xa ziphezulu. Soloko uhlala kwimeko enye yokuququzelela lo msebenzi uphambi kwakho. Ukuba uyaphumelela, ungathandabuzi ukuba uza kuthatha umhlaba omninzi oza kuwufikelela. Yeyiphi enye into ngaphandle kokufumana ezona ngeniso ziphezulu.
Ewe, le meko ayisoloko iyinyani. Kungenxa yokuba kuyenzeka ukuba ubekwimeko yokuphoswa lithuba lokungena kwintengiso yesitokhwe xa oku sele kunyuke kakhulu. Eli linqanaba elinokusetyenziswa ngabatyali zimali abakhulu ukuthatha izikhundla kwizabelo. Ewe, yiloo nto kufuneka uyenze ngokwakho ukuba awufuni ukuzibona ungaphaya kwengxaki enye ukusukela ngoku. Kuba ukuba uwela kwesi silingo, kuninzi ongaphulukana nako kunenzuzo. Yimfundiso eya kuthi ibonelele ngamava aqokelelweyo ngaphezu kweminyaka kunye neminyaka yokutyala imali oyigcinileyo kule asethi yezemali.
Ukuzigcina kwinqanaba lexabiso elibaluleke kakhulu njengamaxabiso nakuphi na ukusebenza kwimarike yemasheya. Kungenxa yokuba, inqanaba apho ukusukela kuloo mzuzu ukuya phambili, iintshukumo ezinamandla ezantsi okanye eziphezulu ezinokuthi ziphuhliswe. Hayi ilize yeah ukuxhathisa kugqityiwe iya kuba sisiqalo sokuvelisa ukuxabiseka ngokubanzi kumaxabiso ngexesha leeseshoni ezilandelayo. Nokuba ukhetha ukuthenga uburharha ukwenza ukonga kunenzuzo ngendlela echanekileyo. Sesinye sezifundo zokuqala ukuba umtyali-mali onamava amancinci kwiimarike zezemali kufuneka azifunde.
Kungenxa yokuba ukuba, ngokuchaseneyo, ixabiso alilawule ukoyisa oku kuchasana, lithanda ukwenza umgca osezantsi onokuthi wehlise ixabiso lesabelo. Kule meko eyona nto inobulumko ukuyenza lungisa izikhundla ngokukhawuleza. Kuya kubakho ixesha lokuthenga izabelo kwakhona, kodwa ngeli xesha ngexabiso elinokhuphiswano ngakumbi kunangaphambili. Ukuya kwinqanaba lokuba inokuya kwinkxaso elandelayo apho indawo yenziwa khona apho ukuwa kuya kuma khona. Isicwangciso esilula kakhulu ukuba ungasisebenzisa kwaye apho unokufumana khona izibonelelo ezininzi ukusukela ngoku.
Ukuchasana kwenziwa kwindawo yexabiso ekulula kakhulu ukuyichonga. Ngokwesiqhelo kuyasebenza ukumisa ukunyuka kwangaphambili kwixabiso kwaye ukoyisa kwalo kuyasebenza ngokwenene kuyanyanzeleka ukuba kukhatshwe kukonyuka okubonakalayo kwenani lokusebenza. Iya kuba sisiqinisekiso esichazayo ukuba istokhwe sizakuqala ngokulula. Ngobuninzi obuchaziweyo okanye obuncinci, kuxhomekeke kwezinye izinto eziboniswa lixabiso kumbuzo. Ukuba, kuyo nayiphi na imeko, isicwangciso esisetyenziswa yinxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Akukho mida apha endleleni
Xa kungasekho miqobo iphambili, yimeko ehambelana nokunyuka simahla. Ewe kunjalo, yeyona ilungileyo kwiminqweno yabasindisi ngenxa yeempawu zayo eziqinisekileyo. Kuya kufuneka isetyenziswe ngu ukuthengwa okukhulu ngabathengisi. Akumangalisi ukuba, iimpembelelo zeli nani likhethekileyo zichazwe ngokucacileyo. Phakathi kwezinye izizathu kuba akasenakuphikiswa ngaphambili. Kungoko ke lithuba elinikwa ziimarike zezemali amaxesha ngamaxesha. Kwaye ngokuqinisekileyo ngekhe ukwazi ukusala esi sicelo esivelisiweyo.
Ngokuqhelekileyo uya kuba ne-uptrend ixesha elide. Ngayiphi na imeko, ayikhululwanga kwizilungiso ezithile kumaxabiso ayo. Iintshukumo ezinokusetyenziselwa ukuqokelela izikhundla kwixabiso lemarike ekhethiweyo. Nokuba kungacwangciswa ngononophelo olunokuthi lujolise kwixesha eliphakathi. Ukusuka kule meko ingaqhelekanga kakhulu kwii-equities, awuyi kuba nanto unokuyenza ngaphandle kokuba ujonge kakhulu ukufumana amaxabiso avelisa eli nani.
Kuba enyanisweni, azikho kangako iimeko apho inani le- ukwanda ngokukhululekileyo, kodwa xa ekugqibeleni zibonakala, awunakukhetha ngaphandle kokungena kwiimarike ngendlela enobundlobongela. Ngummandla wexabiso apho izikhundla zokuthenga zigqithise ngokucacileyo kubathengisi. Ngokutyibilika ngokuthe nkqo kumaxabiso omgaqo-siseko ongenalo naluphi na uhlobo lwemida. Ubuncinci kwelona lifutshane kwimigaqo ukuze ukwazi ukugcina izikhundla zakho ngaphandle kweengxaki ezigqithileyo.
Kutheni le nto kufuneka uvule izikhundla?
Zininzi izizathu oya kuthi ukusukela ngoku ungazishiyi ezi zikhundla kwiimarike zezabelo. Ewe kunjalo, yendalo eyahlukileyo, njengoko uya kuba nakho ukubona ukusuka kumzuzwana. Ayothusi into yokuba kuvulwe amathuba amatsha ukuze unyuse ingeniso kwiakhawunti yakho yokutshekisha. Ngezizathu ezahlukeneyo esizivezayo apha ngezantsi.
Ngaphandle kwamathandabuzo oyena mntu ufumanekayo kwiimarike ze-equity. Kuba kuphela kwayo ayizukubeka mida malunga nokubanakho ukuphinda uhlaziyeke ukuba unokukhula kwizikhundla zakho. Iphantse yaphela njengoko ikumaxesha onke aphezulu.
Ikuvumela ukuba ungene kwakhona kwizikhundla zabo nangaliphi na ixesha nakwimeko. Ngenxa yokuba ungathatha ithuba lokusikwa okungathandabuzekiyo okuya kwenziwa, ukungena njengomnini zabelo. Amaxesha amaninzi njengoko unqwenela, kuba ngala manani ahlala ixesha elide ngokwexesha elibekiweyo.
Yimeko efanelekileyo kakhulu kuwe ukuba uthenge ngomsindo endaweni yezobuchule. Kungenxa yokuba, yintshukumo leyo inikeza ukuthembeka okukhulu ekufezekiseni iinjongo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba ube semngciphekweni ngaphezu kwezinye izihlandlo. Ewe kunjalo, awuyi kuba neengxaki ezigqithileyo ukufezekisa iinjongo zakho ezinqwenelekayo kubudlelwane nehlabathi elihlala linzima lemali.
Kuyo yonke iminyaka kuhlala kusoloko kukho isitokhwe esincinci esihamba kule meko okhethekileyo. Kufuneka uqaphele kakhulu ukuze ubabone ukuba benze ngokukhawuleza. Ngeentshukumo ezininzi ngonyaka ngamnye uya kuba nakho ukwanelisa le mfuno kwicandelo lotyalo-mali.
Akukho zicwangciso zigqibeleleyo zokuqhutywa kunye nodidi lwamaxabiso. Kodwa kufuneka nje Vumela amaxabiso esitokhwe aqhubeke. Kude kube yindawo yexabiso apho ubona kufanelekile ukuba kwenziwe intengiso ngokusemthethweni. Inxalenye okanye kuzo zonke iindawo zayo. Yindlela ethembekileyo yokujonga iakhawunti yakho ukuba ikhule kakhulu.
Akuyi kuba yimfuneko ukuba unyanzelise akukho myalelo wokulahleka kokuyeka kuba lo msebenzi awuyi kuba luncedo kwiimarike zemali. Ukugcina iso kuphuhliso lweekowuti kuya kuba ngaphezulu kokulingeneyo ukukhusela utyalomali lwakho. Ukuya kwinqanaba lokuba iya kuvelisa ukhuseleko ngakumbi kwizikhundla ovulekileyo ngelo xesha.
Elinye icebo lokugqibela elinokukunika iziphumo ezingoyikiyo livela kwinto yokuba unexesha elide kakhulu ukuvula izikhundla. Akunyanzelekanga ukuba uzinciphise kwimida ekhawulezayo, ke kuya kufuneka uyazi kakuhle le ntshukumo kwizabelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Kufuneka wenze nini ukuthenga engxoweni?
Gcina imali kwiimeko ezingathandekiyo